पुरुषलाई गर्भनिरोधको लागि नयाँ आविष्कार, अब एक इन्जेक्सन नै काफी !
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले पुरुषको लागि एक सुरक्षित र प्रभावकारी इन्जेक्सन तयार गरेका छन्, जसले पुरुषको शुक्राणुलाई निष्क्रिय गरिदिन्छ ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार उक्त इन्जेक्सन अहिलेसम्म करीब २ सय ७० पुरुषहरुमा प्रयोग गरिसकिएको छ । यसले ९६ प्रतिशत काम पूर्णरुपमा गरेको पाइएको छ । केवल चार प्रतिशतमा भने यसको प्रभावकारी नतिजा देखिएन ।
यसैगरी इन्जेक्सनको प्रयोगपछि एकदमै कममा मात्र अतिरिक्त प्रभाव वा साइड इफेक्ट देखियो । अत्यन्तै कम मानिसहरुलाई मूड बिग्रनेदेखि डण्डीफोर आउनेसम्मका दुष्प्रभाव देखिएको छ । अहिले वैज्ञानिकहरु करीब २० वर्षका पुरुषका लागि एक प्रभावकारी गर्भनिरोधक बनाउनको लागि अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
अनुसन्धानको क्रममा शुक्राणु नै बन्न रोक्न सक्ने प्रभावकारी तरिकाको खोजी वैज्ञानिकहरुले गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ । यसले गर्दा प्रयोगकर्तामा कुनै असर नदेखियोस् भन्ने उनीहरुको चाहना छ । तर पुरुषहरुको प्राकृतिकरुपमा लगातार शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया भइरहन्छ । सामान्यतः शुक्रकिट बन्ने गति १.५ करोडप्रति मिलिलिटर हुन्छ । यदि यो गतिलाई १० लाख प्रति मिलिलिटरभन्दा कम गर्नुछ भने उच्च स्तरको हर्मोन परिचालित गर्नुपर्दछ ।
यो अध्ययन क्लिनिकल एन्डोक्रिनोलोजी एण्ड मेटाबोलिज्म नामको पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । यसलाई इनडक्राइन सोसाइटीमा छापिएको छ । यो अध्ययन १८ देखि ४५ वर्षसम्मका मानिसमाथि गरिएको थियो जसको कम्तिमा एक वर्षसम्म एउटै साथीसँग सम्पर्क थियो । अध्ययनका लागि उनीहरुको पार्टनरको पनि सहमति लिइएको थियो ।
अध्ययनको सुरुमा उनीहरुको सामान्य अवस्था निश्चित गर्न पुरुषको शुक्राणुको संख्या जाँचिएको थियो । फेरि उनीहरुलाई ८ हप्ताको अन्तरालमा हर्मोनको दुई इन्जेक्सन दिइएको थियो । उनीहरुलाई बाँकी ६ महिनासम्म नजिकबाट अध्ययन गरिएको थियो जतिबेलासम्म उनीहरुको शुक्राणुको संख्या १० लाखभन्दा कम आउँदैन ।
प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा जिउँदै जल्नु पर्‍यो २४ वर्षीया शिक्षिका
‘सिंगल’ हुनुको पीडाः ‘डेटिङ पार्टनर’ खोज्न भन्दै यस्तो सम्म गरेपछि..
यसरी रहन गयो कोरोना भाइरसको नाम, बियरको नाम मिल्नु संयोग मात्रै
प्राचीन रोममा पिसाबमा पनि लगाइन्थ्यो कर, थाहा छ कारण ?
अचम्मको ठाउँ जहाँ अपराधीलाई देवतासरी पुजिन्छ !
विवाहमा सहभागी हुन पाहुनाले गणितका प्रश्न हल गर्नु परेपछि…